Keloids (အမာရွတ်) အကြောင်းသိကောင်းစရာ - intouchmedicare
Last updated: 2022-03-25 | 962 ကြည့်ရှုခြင်း |
အမာရွတ်ဟူသည် မည်သူမှမဖြစ်ချင်ကြသော အရာဖြစ်ပါသည်။ မီးလောင်ဒဏ်ရာအမာရွတ် အမာရွတ်အဖု အမာရွတ်အသေးစား (သို့) ခွဲစိတ်မှု့ကြောင့်ရရှိလာသော အမာရွတ်ကြီးများဖြစ်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမာရွတ်သည် အသားအရေပြားအလှအားပျက်စေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ (သို့) ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအကြောင်းအရာအချို့ကို သတိရခြင်းအားဖိတ်ခေါ်သကဲ့သို့ အချို့သောသူများတွင်သတိရသောအခါတိုင်း၌လည်း စိတ်နာကျင်မှု့အားဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် ကုသမှု့နည်းလမ်းများအားစဥ်းစားရှာဖွေလာကြပါသည်။ အမာရွတ်အားပျောက်စေရန်(သို့)ပါးသွားစေရန် အားလုံးထဲမှတစ်မျိုးမှာ ခီလွယ် (Keloids) အားဆေးထိုးခြင်းဖြစ်ပြီး ကျေနပ်ဖွယ်ရာရလဒ်များရရှိနိုင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဟုယူဆပါသည်။ ခီလွယ် (Keloids) အစိတ်အပိုင်းနှင့်ပက်သက်၍ ခီလွယ် (Keloids) ဆိုသည်မှာဘာလဲ ဘယ်ကစဖြစ်ကြောင်းနှင့်မည်သည့် ကုသမှု့နည်းလမ်းမှု့မျိုးများရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့လာကြည့်ကြရအောင်။
ခီလွယ် (Keloids) ဆိုသည်မှာဘာလဲ?
ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်ဆိုသည်မှာ အဖုကဲ့သို့ဖောင်းကြွလာသောအမာရွတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။၄င်းသည်အရင်ရှိသောဒဏ်ရာဟောင်းပမာဏထက်ကြီးမားကျယ်ပြန့်တတ်လာသောဥပမာအားဖြင့်ဒဏ်ရာ၏အမှန်တစ်ကယ်ပမာဏသည် 1 စင်တီမီတာသာရှည်လျားသော်လည်းခီလွယ် (Keloids) ဟုဆိုသောအမာရွတ်သည် 20 စင်တီမီတာထိနီးပါးကြီးမားကျယ်ပြန့်ပါသည်။ခီလွယ်(Keloids)အမာရွတ်သည်အမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားကြပြီး အမဲရောင်၊အနီရောင်၊ညိုမဲသောအရာများသည်ဒဏ်ရာပျောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် (သို့) တစ်ခါတစ်ရံ ဒဏ်ရာပျောက်ပြီးအချိန်တစ်ခုကြာပြီးနောက်မှဖြစ်ပေါ်ခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ဆိုးရွားပြင်းထန်သော အန္တရာယ်မရှိသော်လည်း ယားယံခြင်း၊စပ်ခြင်း(သို့)ပူဖောင်းကဲ့သို့ဖောင်းကြွလာခြင်း အကယ်၍ ကုတ်မိခြင်း(သို့)မကြာခဏပွတ်တိုက်ခြင်းများအပါအ၀င် အသားအရေပြား၏ အလှကိုပါပျက်စီးစေပါသည်။
ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်သည်ဘယ်ကစဖြစ်ပါသလဲ?
ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်သည် အဓိကကွဲပြားမှု့အကြောင်းအရင်းများစွာကြောင့်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထို့နောက် ၄င်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၏မူမမှန်ခြင်းကိုဖြစိပေါ်စေပြီး ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ကုသမှု့၏ဖြစ်စဥ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသားအရေမှ အမာရွတ်များအားပြုပြင်ရန် ကော်လဂျင့်ဓာတ်နှင့်တစ်သျူးများကိုထုတ်လုပ်ပေသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် အလွန်အကျွံ့ထုတ်လုပ်ပေးမှု့ကြောင့် ဒဏ်ရာအားပုံမှန်ထက်ဖောင်းတက်ဖြစ်ပေါ်လာစေပြီး (သို့) ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်များပိုမိုဖြစ်စေပါသည်။၄င်းသည် အပူလောင်ခြင်း၊ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာများ၊မတော်တဆထိခိုက်မှု့ကြောင့်ဖြစ်သောဒဏ်ရာများ၊ရေကျောက်ပေါက်ခြင်း၊၀က်ခြံအားခွာခြင်း၊ညှစ်ခြင်းအစရှိသည်တို့မှ ဖြစ်ပါသည်။
ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်ဖြစ်ပုံနှင့်လက္ခဏာများ
ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်များသည် ခန္ဓာကိုယ်၏နေရာတိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သော်လည်းအတွေ့ရ အများဆုံးနေရာများမှာ နားရွက်၊လည်ပင်း၊ပခုံး၊ရင်ဘတ်နှင့်နောက်ကျောတို့ဖြစ်ပါသည်။
ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်များသည် အမာရွတ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အဖြစ်များကြပါသည်။ ဥပမာ ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာများ၊မီးလောင်ဒဏ်ရာ၊မတော်တဆထိခိုက်မှု့ကြောင့်ရသောဒဏ်ရာ၊ရေကျောက် ပေါက်ခြင်းမှရသောဒဏ်ရာ၊(သို့)၀က်ခြံညှစ်ခြင်းမှစပ်၍ရလာသောပြန့်ပွားမှု့တို့ဖြစ်ပါသည်။
3.ခီလွယ် (Keloids) ၏အသွင်အပြင်သည် အစပိုင်းတွင် ပန်းရောင်(သို့)ခရမ်းရောင်၊ထိုနောက်ပိုင်းတွင် ထင်ရှားလာပြီးအချိန်ကြာလာပြီးနောက် အသားရောင်အရင့်သို့ပြောင်းလဲသွားခြင်းနှင့်အမာရွတ်အဖု ကဲ့သို့ဖောင်းကြွလာပါသည်။
ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်ရှိသောနေရာတွင် အမွှေးအမျှင်များလည်းမပေါက်ပါ။အရေပြားသည် ဖောင်းတက်လာသော်လည်း ချောမွေ့နေပါသည်။
ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်သည် ပြင်းထန်သော အန္တရာယ်မရှိသော်လည်း စပ်ခြင်း၊ယားခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊တဆစ်ဆစ်ယားယံခြင်း၊သရေပျက်မှု့များအထူးသဖြင့်ဆောင်းရာသီတွင်ပိုယားယံတတ် ပါသည်။အမှတ်တမဲ့မကြာခဏကုတ်မိပါကအရေပြား၌အနာများအား ပြန့်ပွားစေနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်အား ကုသမှု့မပြုလျှင်နှစ်ပေါင်းများစွာ (သို့) ထာ၀စဥ်ကြာရှည် နိုင်ပါသည်။ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအစိတ်အပိုင်းနှင့်ပက်သက်၍အနာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချင်းဖြစ်တတ်ခြင်း၊ (သို့) အချိန်ကြာမြင့်စွာပစ်ထားခဲ့လျှင် ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။
ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်အားကုသခြင်း
ခီလွယ် (Keloids) ဆိုသည်မှာဘာလဲဟူသောအကြောင်းနှင့် ဘယ်ကစဖြစ်ကြောင်းအားမည်သို့သောအသွင်ပုံစံရှိကြောင်းအပါအ၀င်ကိုပါ ကျွန်ုပ်တို့သိရှိကြပြီးနောက် ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်အားကုသခြင်း အစိတ်အပိုင်းနှင့်ပက်သက်၍ ဆေးလိမ်းခြင်းအပါအ၀င်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ခွဲစိတ်အမာရွတ်၊မီးလောင်အမာရွတ်၊ဖောင်းကြွလာသောအမာရွတ်များအားလျော့ကျစေရန်အတွက်ခီလွယ် (Keloids) ဆေးထိုးခြင်း ကုသမှု့အသေးစိတ်အပိုင်းနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးအား ကျွန်ုပ်တို့လာကြည့်ရအောင်။
ခီလွယ် (Keloids) ပလာစတာကပ်ပြီးအသုံးပြုခြင်းသည်အနာဟောင်းနှင့်အနာသစ်နှစ်ခုလုံး၌အမာရွတ် ဖောင်းတက်လာခြင်းအားလျော့ကျစေပါသည်။ခီလွယ် (Keloids) ဖြစ်သောအရေပြားဧရိယာ၌အစို ဓာတ်အားထိန်းပေးခြင်နှင့်အမာရွတ်ဖောင်ကြွလားခြင်းကိုပါချောမွေ့စေလာသည့်အပြင် အရောင် ဖျော့စေခြင်းအားကူညီပြီးလျှင် ဤခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်ပလာစတာကပ်ပြီးအသုံးပြုခြင်းသည် ကိုယ်၀န်ဆောင်သည်များပါသုံးနိုင်ပါသည်။
ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်အားလိမ်းသောဆေးအားဂျယ်လ်နှင့်ခရင်မ်ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်ရရှိပါသည်။ ဤနည််းလမ်းသည် ၀က်ခြံကြောင့်ဖြစ်သောအမာရွတ်ဖြစ်ပေါ်စေသောနေရာတ၀ိုက်၌ အသားတစ် သျှုးနှင့်ချိုင့်၀င်စေနိုင်သည့် အမာရွတ်အားလည်းလိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ကုသလို့ရပါသည်။
ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်အားထိုးဆေးသုံးခြင်းသည် ခေတ်မီပြီး ကျေနပ်မှု့ရသောထိရောက်မှု့ရှိ ခြင်းကြောင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည့်ကုသမှု့နောက်တစ်နည်းလဲဖြစ်ပါသည်။ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်ဖြစ်သောနေရာအား တိုက်ရိုက်ကုသရန် ထိုးဆေးဖြစ်ပါသည်။ပျောက်ကင်းရန်အချိန်အနှေး နှင့်အမြန်သည်ဆေး၏တုံ့ပြန်မှု့နှင့်ဒဏ်ရာအပေါ်မူတည်ပါသည်။
အအေးဓာတ်ပါသောဆေးသုံး၍ကုသခြင်းသည် အလွန်အေးသောဓာတ်အားသုံး၍ကုခြင်းသည်လည်း ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်အား ချောမွေ့စေပြီး သိပ်မကြီးသောအရွယ်ပမာဏဒဏ်ရာမျိုးတွင်သုံး နိုင်ပါသည်။ကုသပုံအဆင့်မှာ အမာရွတ်အားမြင့်မားသောနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ရည်ဖြင့်အေးစက်မှု့အား သုံးခြင်းနှင့်အခြားကုသမှု့များအားပေါင်းစပ်၍ ဥပမာ စတီးရွိုက်ဆေးထိုးခြင်းအစရှိသည်တို့ဖြစ် ပါသည်။
ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်အားခွဲစိတ်ခြင်း ဤနည်းလမ်းသည်ခွဲစိတ်မှု့ဒဏ်ရာအရွယ်အစားအား သေးငယ်စေရန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။၄င်းသည်လျင်မြန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ် သော်လည်း ကန့်သတ်ချက်အချို့မှာ ၄င်းကို ချုပ်နိုင်သောနေရာများတွင်ဖြစ်ပွားသည့်သေးငယ်သော ဒဏ်ရာများနှင့်သင့်တော်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်သောအထူးကုဆရာ၀န်၏ကြီးကြပ်မှု့အောက်တွင်သာ လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
ထို့ကြောင့်ခီလွယ် (Keloids) အမာရွတ်များသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် အရွယ်အစားများစွာရှိ၍ ဒဏ်ရာ၏သက်တမ်းများလည်းကွဲပြားကြပါသည်။ထိုအတွက်ကြောင့်ကုသမှု့သည်လည်းအခြေအနေတစ်ခုချင်းအလိုက်သင့်တော်သောလမ်းညွှန်ချက်များအားရယူနိုင်ရန် ဆရာ၀န်စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှု့လိုအပ်ပါသည်။ဥပမာ အချို့သည်ဆိုးဆေးနှင့်သင့်တော်ခြင်း၊အချို့သည်ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်သင့်တော်ခြင်းအစရှိသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ Keloids (အမာရွတ်) ပြဿနာရှိသူများအတွက် အိမ်အနီးရှိ Intouch Medicare ဆေးခန်းမည်သည့်ဌာနခွဲတွင်မဆို စစ်ဆေးကုသမှု့၀န်ဆောင်မှု့အားပေးနေပါသည်။ကျွန်ုပ်နှင့်နီးသောဆေးခန်းဟု Google တွင်ရိုက်၍ရှာဖွေခြင်း (သို့) Website ၀က်ဆိုက်ရှိဆက်သွယ်နိုင်သောလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် စံချိန်မီသောကိရိယာများနှင့် စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် တိကျမှန်ကန်မြန်ဆန်ဆုံးသောအဖြေများနှင့် ၀န်ဆောင်မှု့ပေးရန် ကျွမ်းကျင်သောအထူးကုဆရာ၀န်များရှိပါသည်။